Knowledge – Cele Seven
ပရိသတ်ကြီးရေ ငယ်ငယ်က ကြော်ငြာ တွေကိုမပြတ်တမ်း ကြည့်ရှူခဲ့တဲ့ သူတွေရှိရင် ကလေးသရုပ်ဆောင် အိန်အိမ်း ကို မှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးခန့်စည်သူ နဲ့ တွဲဖက်ကာ BAB ကြော်ငြာကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း BAB ကြော်ငြာလေး …
May 1, 2022 By LY C Knowledge
အျပင္းအထန္ေဝဖန္မႈ႔ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္လိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္ သာဒီးလူ……
April 9, 2022 By LY C Knowledge
လတ္တေလာ ပရိသတ္ေတြသိခ်င္ေနတဲ့ အခ်စ္ေရးကိုတရားဝင္ခ်ျပလိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ သဇင္ထူးျမင့္…..
April 8, 2022 By LY C Knowledge
ခိုင္ကေလးေတြနဲ႔ ေဂဟာမွာတစ္ေန႔တာတူတူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ ဒီဗီဒီယိုေလးခ်ျပလာတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ….
April 5, 2022 By LY C Knowledge
ဥပုသ္လမွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးခက္ခဲေနတဲ့ မိသားစုကအကူအညီေတာင္းလာလို႔ အႏုပညာေၾကးထဲကေန လႉေပးလိုက္တဲ့ ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္…..
April 3, 2022 By LY C Knowledge
ဘာေၾကာင့္အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးဆက္တိုက္လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကိုေျပာျပလာတဲ့ ႏွိုင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ ဗီဒီယို…..
March 29, 2022 By LY C Knowledge
အင္တာဗ်ဳးမွာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ့ မ်က္ႏွာကိုထိုင္ၾကည့္ၿပီး ၾကည္ႏူးေနရွာတဲ့ ေရႊမႈံရတီ ရဲ့ဗီဒီယို…..
March 25, 2022 By LY C Knowledge
အသဲယားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ သမီးေလး ထရွက္ရွာ ရဲ့ မိတၳီလာကန္မွာ ဖားေကာက္ခဲ့ပါ သီခ်င္း….
ပရိသတ်ကြီးရေ စန္ဒီမြင့်လွင် ကတော့ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ထောင်ထားပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒီမြင့်လွင်က အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင် ခဲ့တဲ့ ကြားထဲကနေ သမီးလေး Treasure ကိုလည်း သေချာ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ …
March 24, 2022 By LY C Knowledge
ဘာသတင္းမွမၾကားရတဲ့အတြက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို စိတ္ပူေနရွာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလွိုင္…..
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ နဲ့ သားဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟတို့ကို ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများ ဖြိုဖျက်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ တော့သားအဖနှစ်ယောက်စလုံး ကို အင်းစိန်ထောင်ထဲသို့ ပို့လိုက်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးတွေကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဖြိုဖျက်ရန်စေခိုင်းမှု ၊ ဖြိုဖျက်ချမှုတို့နဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုး(စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး)က တရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြား လာတာကြောင့် …
March 23, 2022 By LY C Knowledge